उठ्नै नसक्ने गरी थेचारिए नेपाल !
Homerajnitiउठ्नै नसक्ने गरी थेचारिए नेपाल !
कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा प्रचण्डलाई दिने सहमति गरे पनि पार्टीमा ओली नै हावी
नोट अफ डिसेन्ट लेखे पनि नेपालका लागि तत्काल अनुकुल निर्णय हुन सक्ने छैन । सहमतिबीचको असहमति भएका कारणले दुई अध्यक्षले गरेको निर्णय नै कायम हुने बताइएको छ । ‘नोट अफ डिसेन्ट त संविधानमा तत्कालिन माओवादीले पनि लेखेको थियो, संविधान जारी भएन त ?’, प्रचण्डनिकट एक नेता भन्छन्,‘पार्टीलाई बलियो बनाउनका निम्ति जस्तोसुकै निर्णयमा पनि पछि हट्न हुँदैन । प्रचण्डका लागि पनि कतिपय निर्णय मन नपरेका हुन सक्छन् ।’
पार्टीका विभिन्न विभागका जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने क्रमको निर्णयमा प्रचण्ड आफैंले पनि असन्तुष्टि देखाएकै थिए । उनले सार्वजनिक रुपमा नै कहिलेकाहीँ पार्टी एकता नगरेको भरुए पनि ठिक हुन्थ्यो की भन्ने लाग्ने गरेको बताइसकेका थिए । तर, त्यसको निचोडमा भने कम्युनिस्ट एकीकरण कमजोर बन्ने र आन्दोलन तुहुनसक्ने भएका कारण बाध्यकारी भएर निर्णय अनुमोदन गर्नुपरेको व्याख्या समेत गरेका थिए ।
सिंगापुरमा उपचार सकेर फर्किएपछि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली पार्टीमा हावी भएको देखिए । विवादमा रहेका संगठन विभाग र स्कुल विभागमा ओलीको निर्णय कायम भयो । यतिमात्र होइन, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गर्ने केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापासमेतलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन ओली सक्षम भए । जबकी, पूर्वमाओवादीले ओली आउनासाथ थापामाथि कारबाही हुने हल्ला चलाएका थिए ।
प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने प्रस्तावका आधारमा ओलीले पेस गरेका सबै नामहरूले भनेका विभागमा अनुमोदन हुने ताकत राखेको कतिपयको बुझाई छ । त्यतिमात्र होइन, ओली खेमामा उभिएका कारणले महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित नेता बामदेव गौतमलाई विधान र सहमतिमा परिकल्पना नै नगरिएको उपाध्यक्ष पदमा राख्ने सहमति पनि भयो ।
पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने र सोही पार्टीको आधिकारीक नीति रहेको बताइरहँदा अध्यक्ष प्रचण्डले भने जनताको जनवादको विषयलाई अगाडि सारेका थिए ।